Hlola ngokugcwele izinto ezintsha. Into yekhwalithi ye-premium inezici ezithile: izindwangu ezingabizi (ngokujwayelekile ngokwemvelo noma ngokufaka okuncane okuyizinhlamvu zokwenziwa kwamandla), ukusika okuhle, ukuhleleka okuhle nokufakwa okuhloniphekile. Uma umkhiqizo ungahlangani okungenani umgomo owodwa - wenqaba ukuthenga, kungakhathaliseki ukuthi unesifiso esikhulu kangakanani. Ngenxa yalokho, uzothenga kancane, kodwa uzobukeka kangcono kakhulu ezintweni ezinhle, ezihlezi kahle.
Izinzwa ezithembekayo zokuthinta lapho ukhetha into
Thola isitayela sakho bese utshala kuso. Yenza uhlu lwezinto eziyisisekelo, ngokusekelwe kokuthandayo. Ngakho-ke, abalandeli be-classics bangenza ijaji, ihembe elimhlophe namabhulukwe eshidi, nabathandi be-cazuela - i-jeans ephelele, i-cardigan ne-coat-oversize. Izitshalo eziyisisekelo kukhona okumele zithengwe kuqala.
I-Stylistics ye-wardrobe - isiteji sokuqala endleleni eya esithombeni esimangalisayo
Ungafaki izinto "ezimakethe" ezivela ohlwini lwakho. Ingubo yokugcoba yama-canonical, ijazi elifudumele loboya, ijaji elihle kakhulu - lezo zakhi ongazakhela kuzo izithombe eziningi ezifanele izinkathi eziningana. Kulula ukubala: inani langempela lezinto ezibiza kakhulu liphakeme kakhulu kunezibuyekezo ezimbalwa zesabelomali.
Izinto - "izimpawu" - zabafazi beqiniso bemfashini
Qinisekisa ukunakekelwa okufanele kwemikhiqizo yekhwalithi. Geza izinto ze-wool, isilikhi kanye ne-cashmere ngesandla usebenzisa amathuluzi akhethekile, isikhumba kanye ne-suede - unikeze ukuhlanza owomile emva kokusikwa kwamasokisi. Izicathulo ezintsha zihanjiswe ngokushesha esitolo sesigqoko sokufaka isembatho esivikelayo emaphaketheni ayodwa futhi athembekile ezithende. Ungagcini ijezi elincane emagxeni - liyabulala: kungcono ukuphoqa ngokucophelela imikhiqizo bese uyibeka emashalofini.
Qaphela izinto - zizohlala isikhathi eside
Tattoo emzimbeni wesifazane
Ukufaniswa komuntu wesifazane: iziketi - isimo sehlobo-2016
Izitayela ze-Fashion, Autumn-Winter 2016-2017 (isithombe): yiziphi izitayela zezinwele ezingcono kunazo zonke ngo-2016?
Izambatho zangaphandle eziphathekayo zabesifazane nabesilisa, Spring 2015
Ukulungele intwasahlobo kusengaphambili: i-fashion fashion of 2014
I-quadrangle eyinkimbinkimbi yobudlelwane bomndeni
Isaladi sesibindi sesibindi nemifino
Angikwazi ukuthethelela ukuthengisa, ukuthi ngingaphila kanjani?
Indlela yokupheka ukudla okumnandi ngaphandle kwenyama?
Ukukhulelwa okunempilo kanye nempilo yabesifazane
Karl Lagerfeld ukudla
Indlela yokusheshisa ukukhula kwezinwele ekhanda ngaphandle kokwakha
I-horoscope yobulili: i-Libra, i-Scorpion, i-Sagittarius
Kuthiwani uma umngane wami omkhulu engithanda?
UZemfira uphinde waba phakathi kwehlazo ngenxa yefulege lase-Ukraine